एक खर्ब रुपैयाँ बराबरको एफडीआईको स्वीकृति पाइसकेका दुई उद्योग फिर्ता ! | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
एक खर्ब रुपैयाँ बराबरको एफडीआईको स्वीकृति पाइसकेका दुई उद्योग फिर्ता !
काठमाडौं । करिब एक खर्ब रुपैयाँ बराबरको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) को स्वीकृति पाइसकेका दुई उद्योग फिर्ता हुने भएका छन् । करिब ५५ अर्ब रुपैयाँ लगानी स्वीकृति पाएको नाइजेरियाको डांगोटे सिमेन्ट र ४० अर्ब स्वीकृति लिएको भारतको रिलायन्स सिमेन्टबीचमै फर्किने भएका हुन् । डांगोटेले सिमेन्ट उत्पादनका लागि खानी नपाएको र रिलायन्सले ‘ब्रान्ड नेम’ नपाएपछि चासो देखाउन छाडेको हो ।
‘रिलायन्स हाम्रो सम्पर्कमै छैन । हामीले लेखेको पत्रको समेत वास्ता गरेको छैन,’ लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) महाप्रसाद अधिकारीले भने, ‘डांगोटेले तीन ठाउँमा खानीका लागि प्रतिस्पर्धा गरेको थियो तर पाएन । उसले पनि लगानी गर्ने सम्भावना कम छ ।’
उनका अनुसार यी दुवै उद्योगले लगानीको पुनस् तत्परता देखाए दोहोर्‍याएर एफडीआईको स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ । लगानी बोर्ड नियमावली, २०६९ अनुसार सार्वजनिक–निजी साझेदारी ९पीपीपी० बाहेकका परियोजनाको एफडीआई स्वीकृत भइसकेपछि एक वर्षमा परियोजना लगानी सम्झौता (पीआईए) गरिसक्नुपर्ने छ ।
‘पीआईए अवधि बढाउनुपर्ने मनासिव कारण देखिएमा बोर्डले १२ महिना नबढाई म्याद थप गर्न सक्नेछ,’ संशोधित नियमावलीमा भनिएको छ । यस आधारमा यी दुई आयोजनाका लागि पीआईए गर्ने समयावधि दुई वर्षको हो । डांगोटेले एफडीआई स्वीकृति लिएको करिब ४ वर्ष र रिलायन्सको तीन वर्ष नाघिसकेको छ । अधिकारीले भने, ‘फेरि आउन चाहे नयाँ लगानीकर्ताझैं सुरुदेखिकै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ ।’
यो पनि पढ्नुहोस बहुमूल्य खानी प्रतिवेदनमै सीमित
१८,पुष.२०७४,मंगलवार ०९:३० मा प्रकाशित
← अाफ्नाे गाउँ अाफै बनाउँछाैंः सडक बनाउन जंगलको बास, विकासमा जुटेका प्यूठानी !
एमाले–माओवादी एकता प्रक्रियाः सिद्धान्त, नेतृत्व र नाम परिवर्तन हुँदै →
नेपाली कांग्रेस प्रदेश २ को अधिवेशन अनिश्चित